ရေချိုးကန်ထဲက သူမရဲ့ရင်ခုန်ဖွယ် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ရေချိုးရင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ပုံရိပ်များ – Shwe Ba
ရေချိုးကန်ထဲက သူမရဲ့ရင်ခုန်ဖွယ် လျှို့ဝှက်အလှတရားတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ရေချိုးရင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ပုံရိပ်များ
By Shwe BaPosted on April 18, 2021 April 18, 2021
မော်ဒယ်လ် ၊ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချော လေး နန်းသီရိမောင် က တော့ အရုပ် မလေးလို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မျက်နှာ လှလှလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အသည်းခိုက် အောင် ကြွေနေ ရတဲ့ မိန်းမလှ လေး ဆိုရင် လည်း မမှားပါ ဘူးနော် ။ ဒါ့အပြင် နန်းသီရိမောင် က အမြဲလိုလို အမိုက်စား ဖက်ရှင် တွေနဲ့ ခေတ် ဆန်ဆန် လေး လှနေတတ် တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ခေတ်နဲ့ အညီ လိုက် လျော ညီထွေစွာ ဝတ်စား ဆင်ယင် တတ်တဲ့ နန်း က လူငယ် ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖက်ရှင် လေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အထာကျ နေတတ် သူ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပီပီ မိန်းကလေးတိုင်း အားကျရတဲ့ အချိုး အစား ပြေပြစ်ပြီး လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာရရှိ ထားတဲ့ သူမ က တော့ ယခုမှာ အနှပညာ အလုပ် တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးတွေကို လည်း ရိုက်ကူးလျက် ရှိနေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
နန်း ကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ် တွေနဲ့ အမိုက် စား အလှ ပုံလေးတွေ ကို သူရဲ့ instagram အကောင့် မှာ အများဆုံး ဖော်ပြလေ့ ရှိတာ တွေ့ရပါ တယ် ။ လတ်တလော မှာလည်း နိုင်ငံခြား မင်းသမီးလေး လားထင်မှတ်ရလောက် အောင် ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန် စွဲမက် ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ ရေချိုးရင်း ရိုက်ထားတဲ့ ဖက်ရှင် အဆန်းလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လန်းနေတဲ့ ပုံလေးကို ဖော်ပြထားတာ ကြောင့် ပရိသတ်ကြီး တွက် မျှဝေပေး လိုက် ပါ တယ် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး နန္းသီရိေမာင္ က ေတာ့ အ႐ုပ္ မေလးလို ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာ လွလွေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အသည္းခိုက္ ေအာင္ ေႂကြေန ရတဲ့ မိန္းမလွ ေလး ဆိုရင္ လည္း မမွားပါ ဘူးေနာ္ ။ ဒါ့အျပင္ နန္းသီရိေမာင္ က အျမဲလိုလို အမိုက္စား ဖက္ရွင္ ေတြနဲ႔ ေခတ္ ဆန္ဆန္ ေလး လွေနတတ္ တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ေခတ္နဲ႔ အညီ လိုက္ ေလ်ာ ညီေထြစြာ ဝတ္စား ဆင္ယင္ တတ္တဲ့ နန္း က လူငယ္ ဆန္ဆန္ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ဖက္ရွင္ ေလးေတြနဲ႔ အျမဲတမ္း အထာက် ေနတတ္ သူ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ ပီပီ မိန္းကေလးတိုင္း အားက်ရတဲ့ အခ်ိဳး အစား ေျပျပစ္ၿပီး လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားသူ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကို အခိုင္ အမာရရွိ ထားတဲ့ သူမ က ေတာ့ ယခုမွာ အႏွပညာ အလုပ္ ေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို လည္း ရိုက္ကူးလ်က္ ရွိေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။
နန္း ကေတာ့ သူမရဲ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ ေတြနဲ႔ အမိုက္ စား အလွ ပုံေလးေတြ ကို သူရဲ့ instagram အေကာင့္ မွာ အမ်ားဆုံး ေဖာ္ျပေလ့ ရွိတာ ေတြ႕ရပါ တယ္ ။ လတ္တေလာ မွာလည္း နိုင္ငံျခား မင္းသမီးေလး လားထင္မွတ္ရေလာက္ ေအာင္ ၾကည့္မိသူတိုင္း ရင္ခုန္ စြဲမက္ ခ်င္စရာ ေကာင္းတဲ့ ေရခ်ိဳးရင္း ရိုက္ထားတဲ့ ဖက္ရွင္ အဆန္းေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ လန္းေနတဲ့ ပုံေလးကို ေဖာ္ျပထားတာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီး တြက္ မၽွေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
Previous post ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မမဆောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် အမိုက်စားTik Tok ဗီဒီယိုလေး
Next post ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့ ရင်ခုုန်သံတွေကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပုံရိပ်လေးများ